Sakafo 10 mampidina tosi-drà
Covid-19 : Olona 7 voa,
efa niriaria teny Ankadifotsy, Alasora, Ambodin'Isotry, Ampitatafika...tandremo! Manomboka miparitaka sy hita eny amin'ny fokontany vitsivitsy eto Antananarivo renivohitra ilay valan'aretina Coronavirus ankehitriny hoy ny tatitry ny mpitondra tenin'ny CCO,
Covid-19 Ireo Mpitandrina mivady no sitrana voalohany !
Ireo Mpitandrina FJKM mivady avy namita iraka tany am-pitan-dranomasina no Malagasy sitrana voalohany tamin'ireo mararin'ny Coronavirus notsaboina teto Madagasikara. Raha tsiahivina dia avy namita iraka, nitokana mpiandry tany am-pitan-dranomasina ny
Tapitra sa tsia ny fihibohana? Fantatra rahampitso!
Araka ny fanazavan'ny filoham-pirenena omaly ihany dia maromaro ireo toerana nahitana ireo trangana Coronavirus teto amintsika. Anisan'ireny ny teto Antananarivo, Ambatomanga, Toamasina, Fianarantsoa,
Covid-19 : Tovovavy 19 taona, ao Isotry indray no tratra
Mahatratra 59 ireo olona mitondra ny tsimokaretina Covid-19 eto Madagasikara amin’izao fotoana izao.
Covid-19 : Misy mpivarotra ao Isotry sy ankizy 13 taona voa
Tafakatra 58 ireo olona mitondra ny tsimokaretina Coronavirus eto amintsika amin'izao fotoana izao, araka ny tatitra nataon'ny filoham-pirenena omaly.
Covid-19 : Gasy tany Frantsa sitrana… manoro hevitra!
Tera-tany Malagasy monina ao Frantsa no nijoro vavolombelona tamin'ny tambajotran-tserasera fa sitrana tanteraka tamin'ilay aretina Covid-19. Ankohonana iray izy ireo no ao an-trano ka ireo ankizy izay 11 taona, 9 taona ary 6 taona no voa voalohany avy any am-pianarana.
Na dia tsy fantatra mazava aza ny antony rehetra mahatonga ny tosi-drà hiakatra dia fantatra fa misy fahazarana ara-tsakafo no mahatonga azy hiakatra. Mba hampidinana ny taha hiakarany dia misy karazan-tsakafo manampy betsaka sy mitazona ny tosi-drà tsy hiakatra. Ireto avy izy ireo :
Mihinana legioma sy voankazo betsaka indrindra toy ny brocoli izay be kalsioma, manezioma ary potasioma. Ireo no handrindra ny tosi-drà. Misoroka aretina mifandray amin’ny lalan-drà rahateo ny flavonoïdes ao anatiny. Tsy atao masaka be kosa mba ho voatahiry avokoa ny otrikaina ao anatiny.
Efa maro no mahafantatra azy ho mpampidina tosi-drà. Voaporofo rahateo fa mampihena ny tahan’ny tosi-drà sy ny kolesteroly ratsy ny tongolo gasy. Mihinana singana efatra isan’andro raha te-hisitraka ny tombotsoa azy avy aminy.
Be potasioma, kalsioma ary manezioma ny vomanga ka manampy amin’ny fampidinana ny tosi-drà tsara koa .Karazana « féculents » manana « indice glycémique » ambany izy. Manome hery izy noho izany.
Araka ny voka-panadihadiana iray natao tao Minnesota dia mampihena hatrany amin’ny 31% ny taha hampiakatra ny tosi-drà ny fihinanana yaourt matetika sy amin’ny fotoana raikitra noho izy be kalsioma. Olona 2.000 teo no nanaovana andrana tamin’izany nahitana ity voka-panadihadiana ity. Yaourt tena izy be “probiotiques” kosa no tsara hohanina.
Ny « amandes » manta
Mahatsara ny fahasalamana sady mitazona ny tosi-drà tsy hiakatra koa ny « amandes noho izy be potasioma, manezioma, ary asidra gras tsara kalitao.
Be flavonoïdes ny kakao ka miaro ny vatana amin’ny rarin-tsaina .Ity aretina farany ity mantsy anisan’ny fototra mahatonga ny tosi-drà hiakatra ihany koa. Be manezioma sy potasioma rahateo ny kakao. Tokony ilay mbola feno otrikaina kosa no hohanina (60%) farafahakeliny ny kakao ao anatiny.
Misoroka aretina maro ny tamotamo ary anisan’ireny ny fiakaran’ny tosi-drà. Manana fahafahana misoroka ny rà tsy hivaingana ao anaty sady miaro azy amin’ny mikraoba koa ny tamotamo.
Hita ao anatin’ny akondro ny otrikaina mineraly miaro ny fo sy ny lalan-drà dia ny manezioma, ny potasioma ary ny kalsioma izany. Be fibres, sy mpanala arafesina ary vitamina B sy C koa ny akondro ankoatra izay. Mahasalama tsara ny mihinana azy vokatr’izany .